Bolivia : aty anaty aterineto ilay chola feminista no manohy ny tolony · Global Voices teny Malagasy
Yolanda Mamani , Chola, mpanoratra bilaogy sady mpamahana Youtube
Voadika ny 28 Novambra 2019 5:07 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Esperanto , Nederlands, English, Italiano, Español
Sary nataon'i Adolfo Alba ho an'ny Revista Rascacielos (laharana 13, 2019). Nahazoana alàlana.
(Fanamarihana avy amin'ny mpandika: Teny anondroana ireo mpitolona ho an'ny zon'ny vehivavy ny feminista)
Ireo vehivavy indizeny avy any Bolivia, faritra ao amin'ny Cordillère des Andes no antsoina hoe cholas [fr], sarahany ho randrana roa ny volo lavany, manao satroka jobokaty, mitafy lamba, milanja kitapo aguayo (kitapo maroloko norariana ho efajoro) mba hitaterany zavatra eo an-damosiny, ary ny pollera, zipo lava mivalombalona eo ambony atin'akanjo marobe.
Inona no toeran'ny chola ao Bolivia ? Ahoana no fomba fanehoana ireo cholas boliviàna eny anaty fampahalalambaovao ? Inona no ambaran'ny Akademia momba an-dry zareo ? Inona no ataon-dry zareo rehefa mandray anjara aminà filatroana mampidera fomba fiakanjo ? Inona no toerana raisina any anatin'ireo fetin'ny mozika elektrônika ? Toerana pôlitika toy ny ahoana no omena azy ireny amin'izao fotoana maha-eo amin'ny fitondràna ny filoha voalohany avy amin'ny indizeny izao tao anatin'ny folo taona mahery ?
“Lamaody izao ny maha-chola”, hoy ny navalin'ilay chola feminista Yolanda Mamani. Etsy andaniny koa, efa hatramin'ny 2015 no mamoaka bilaogy iray mitondra izay anarana izay ihany koa izy, habaka iray nohaingoany hatramin'ny 2019 aminà fantsona iray ao amin'ny YouTube antsoina hoe “Chola Bocona” (chola manta vava). Izay rehetra anaovany tatitra dia hazavain'i Yolanda ao, toy ny ataon'ny mpampianatra iray, toy ny fanaon'ny mpanadihady aminà onjampeo mpijery ny zavamisy amin'izay rehetra adihadiany, miaraka amin'ny fitandremana tsy misy tomika toy ny ataon'ny mpandidy, momba ny anjara toeran'ireo cholas eny anivon'ny fiarahamonina.
Toy ny itantarany azy any am-piandohan'ilay lahatsariny voalohany voarakitra ao amin'ny YouTube :
Rehefa nitolona ho an'ny zoko aho, dia hoy ireo mpampiasa ahy : “Maninona ianao no manta vava ? Fa maninona ianao no “imilla” manta vava? Maninona no tsy akombonao ny vavanao rehefa miteny aho ? Izaho no mandoa ny karamanao, tokony hihaino ianao, tsy mahazo miteny na inona na inona”. Noho io antony io no nanapahako hevitra hihambo amin'io teny io. Eny, vehivavy manta vava aho. Raha tsy izay aho, tsy ho eto akory hitantara ny tantarako.
Imilla midika hoe tovovavy amin'ny fiteny aymara [fr] saingy azo ampiasaina koa ho fanambaniana. Ny Bocona dia izay pentsambava ary mitaky misimisy kokoa hatrany. “Ankizivavy sahisahy”, izay no nolazain'ireo mpampiasa azy fony izy niasa an-trano ary nitaky ireo zony, toy ny fanajàna ny ora tokony hiasàny, ho afaka hanohy hitafy ny zipo mariky ny maha-izy azy, handeha any an-tsekoly, hahazo ireo fiahiana ara-tsosialy na handeha any amin'ny anjerimanontolo.
“Toy ny haingon-trano no tian-dry zareo hiheverana anay”
Tantarain'i Yolanda ao anatin'ilay lahatsariny ny fomba nankalazàna ny sarin'ny chola, no sady nanaovana ihany koa izay tsy hitokisana ny filôzôfiam-piainany. Antsoina handray anjara amin'ny fiainana pôlitika ireo cholas, saingy tsy asiana vidiny ny fomba fijery sy ny tetikasan-dry zareo. Natao hanadiovana ny rivotra politika ny sarin-dry zareo ary nampiasaina handaniana filatsahan-ko fidiana.
Tantarainy ihany koa hoe rehefa miakatra sehatra manao filatroana fampideràna fitafy izy na aminà fety ara-barotra natao hamarotana ny fotokevitra fampifangaroana ny Andes sy ny elektrônika, lalaovina amin'ny resaka vakodrazana ireo cholas, ferana ho amina dihy mirindra entina hanaingoana fotsiny ny fandraisan'izy ireo anjara. Na inona na inona sehatrasa ataon'izy ireny ivelan'ny asa an-trano, dia lasa anton-dresaky ny mpampita vaovao; na izy solombavambahoaka, mpiasampanjakana, mpilalao skate na mpamorona fantsona Youtube, toa azy. Manamafy ihany koa i Yolanda fa ny fomba fijerin'ny Akademia an'ireo cholas dia ivelany sy ankosotra fotsiny.
Sary an'i Eduardo Montaño. nahazoana alàlana.
Ankoatra izany, “misy vehivavy mampiasa ny pollera ho fanararaotana fotsiny”, hoy izy manoratra ao anatin'ny bilaoginy, mitondra ny lohateny hoe “Ireo tovovavy manova endrika”. Angatahan'i Yolanda amin'izy ireo ny antony ampiasan'izy ireo ny pollera mba hanaovana ny asanà mpilatro na hidirana aminà asam-panjakàna fa tsy ho lasa mpamafa làlana na mpiasa an-trano. Manoloana io fampiasàna ny pollera ho toy ny fanafenana endrika io, isisihan'i Yolanda ny filazana ny zavamisy hoe, aminy, ny tena fijoroana ho chola, dia ny mitolona.
Ny hevitra lalin'ireo fomba amam-panao cholas
Faritany ihany koa ny dikan'ny randram-bolo ho an'ireo cholas, ny fanaovana takalo, ny fandraisana anjara amin'ny famafàzana sy ny fijinjàna. Tantarainy miaraka ny firindràna mivoaka avy amin'ireo fomba amam-panao tahaka izany sy ny fomba nahasimba azy ireny nohon'ny fanomezana lanja be ny lehilahy, ny faniriana ny ho fotsy hoditra ary ny fijery ny atao hoe fandrosoana mankany amin'ny fanjifàna.
Ao amin'ny bilaoginy, hazavainy ny momba ny fandradrànana volo, hoe fotoana iray iresahana io, ifampijeren'ny samy vehivavy, ary fitaovana iray hanalàna ny alahelo eo am-pihogoana volo eo. Noho ny maha-zavadehibe azy ireny, midika sazy imasom-bahoaka ny fanapahana ny randran'ny vehivavy iray, noho ny fijangajangàna, ohatra, na dia tsy misy fiantraikany amin'ireo lehilahy aza izany.
Ao anatin'ny iray amin'ireo lahatsorany nomeny lohateny hoe “Ny fotoam-pamafazàna sy fijinjàna, fihaonana iray tena ideolojika” (teny espaniôla), hazavainy fa io no toerana iray ao anatin'ny vondrompiarahamonina ihaonan'ireo mpila ravinahitra sy ireo mponina eo an-toerana, ary eo ireo lehillahy sy vehivavy no afaka mifanakalo hevitra anaty fitoviana momba ny hevitra ara-politikan-dry zareo sy mahazo ireo vaovao erantany sy avy eo amin'ny firenena. Mifanohitra amin'izay mitranga any amin'ireo fihaonambe izay anjakan'ny rafitra antanan-tohatra sy ihomehezana fotsiny ny vehivavy rehefa mba mandray fitenenana izy ireo.
Momba ny takalo, anaty lahatsoratra iray hafa izy no manazava hoe ahafahana mifanakalo sakafo eo amin'ireo samy mpamboly izy io, misy ihany koa ireo mpivarotra tonga mitondra sakafo am-bifotsy efa lany andro mankany amin'ireo tantsaha. Fitàhan-dry zareo amin'ny fanomezana sakafo efa simba izy ireny, izay mankarary ny olona, ary entin-dry zareo ireo tsara indrindra amin'ny vokatra.
Hosodokon'i Valentina Vilaseca ho an'ny gazetiboky Rascacielos (laharana13, 2019). nahazoana alàlana
Chola, feminista sady mpanao gazety
Mampiasa ny ‘izaho’ hatrany i Yolanda Mamani rehefa manoratra sy miresaka. Voalohany indrindra dia chola izy ary avy eo dia mpikambana anatin'ny hetsika feminista Mujeres Creando (Vehivavy mpamorona ), mpianatra ny sosiôlôjia, mpandrindra ny vlog [fr] Chola Bocona sy ny bilaogy Ser chola está de moda (Lamaody izao ny maha-chola). Izy ihany koa no mpamokatra ny Warminyatiawinkapa, “Ny vaovaom-behivavy” amin'ny fiteny aymara, fandaharana iray isaky ny Zoma ary alefa ao La Paz amin'ny onjampeo Radio Deseo de Mujeres Creando (Hetahetan'ireo vehivavy mpamorona).
Io onjampeo io ihany koa no nandefa ilay fandaharana “Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad” (Mpiasa an-trano mirehareha sy mendrika), notontosain'i Yolanda sy nàmany roa avy amin'ny Sendikan'ireo mpiasa an-trano ao Sopocachi. Niaraka tamin'ireo vehivavy maro avy amin'ny sehatrasa hafa, nanaraka fiofanana momba ny asa anaty onjampeo ry zareo, fiofanana natolotry ny Mujeres Creando.
Fony i Yolanda nikarakara ny fandaharany voalohany ho an'ny onjampeo, nanapaka hevitra izy ny handrakotra ny Diabe faha VII ho an'ny TIPNIS [fr], faritany indizeny iray sy valam-pirenena ao avaratra-atsinanan'i Bolivia tandindonin'ny asa fanamboarana lalam-pirenena [fr]. Io zavatra niainany io no nanosika azy hianatra ny sôsiôlôjia.
“Sarotra ny hisianà tontolo tsy misy [ireo mpikamenona], manta vava”
Nianatra ny fiteny Espaniôla i Yolanda Mamani, izay ny yamara no tenindreniny, rehefa nifindra nankany La Paz teo amin'ny faha-11 taonany, niaraka tamin'ny nenitoany izay nampiasa azy ho toy ny mpitaiza zaza mba ho tambin'ny fampiantranoana azy. Vao teo amin'ny faha-12 taonany, tsy maintsy nitady asa izy, nanao asa an-trano ary nijanona tao nandritra ny 11 taona. Latsaky ny 50 dolara ny karamany tamin'izany, tsy misy ireo tombontsoa sôsialy fanampiny. Nitaky ny ho afaka mandeha an-tsekoly izy ary noroahana rehefa naniry ny handeha eny amin'ny oniversite. Fony izy mbola zaza, naterin'ny rainy tamin'ny ampondra namonjy sekoly any amin'ny toerana alaina ora iray sy sasany dia an-tongotra. Tao Warasita, 15 kilaometra any amorontsiraka atsinanan'ny farihy Titicaca i Yolanda no teraka.
Tolona no nanamarika ny fiainan'i Yolanda: mba ho chola iray mandeha an-tsekoly, mifindra monina an-tanandehibe, mianatra ny fiteny espaniôla, miasa an-trano, tsy mamela ny fitafy pollera, mandeha mamonjy kolejy, mpikambana anaty sendikà, manao pôlitika amin'ny maha-feminista azy, mamonjy oniversite, miasa aminà onjampeo ary ankehitriny, chola feminista mpamahana Youtube. Na mbola ho inona no dingana manaraka eo, hanohy hanome antsika ny fitaovana ahafahantsika misaintsaina ity chola manta vava ity, hahafahantsika mandalina ireo habaky ny fahefana sy fizaràna ny zavatra hitantsika. Tsy tongatonga ho azy any anaty lahatsariny ny fanaovany veloma amin'ny fitenenana hoe : “Sarotra ny hisianà tontolo iray tsy misy [ireo mpikamenona] manta vava ”.
Momba ireo cholas bôliviàna
Ireo cholas no maripamantarana ara-kolontsaina bôliviàna tena naondrana be indrindra. Tamin'ny fotoana rehetra dia nampanekena ny fanavakavahana ry zareo. Na izany fanerena hanaiky ny teny tsy azo ivalozana manoloana ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fiainana pôlitika ao anatin'ny vondrompiarahamonina misy azy, ny fandraràna azy ireo tsy hamonjy ireo toerana natao ho an'ny daholobe na ireo fitaterana, na ny fanibohana azy ireo tsy hanao afa-tsy asa an-trano — iray monja amin'ireo asa azon-dry zareo atao rehefa tonga an-tanandehibe — anaty fepetran'asa tsy mendrika, izay zakan'izy ireo ny fanararaotana sy fanolànana, ara-batana sy ara-tsaina ataon'ireo mpampiasa. Amin'izany zavamisy izany, ny fandàvana ny fomba fitafin-dry zareo dia làlana iray tsy maintsy izorana mba hidirana hahazo vintana tsaratsara kokoa.
Ankehitriny, taorian'ny efa ho 60 taona nitolomana ara-tsôsialy, niova ny toeran'ireo cholas ao anaty fiarahamonina, niala tamin'ny fanilihana tsy tapaka nankany amin'ny ezaka vitsivitsy ho fanomezana lanja azy. Na izany aza, tsy mbola manana vintana loatra izy ireo ho afaka hisitraka ny zony hahazo fanabeazana, fahasalamàna, ny rariny ary asa mendrika, ankoatra ny zavatra hafa, raha miohatra amin'ireo vehivavy tsy indizeny.
Na mbola misy raiki-tampisaka aza amin'izao fotoana izao ny toetra mpanjanaka, izay mitazona an-dry zareo ireny ho toy ny andevo, manilika azy tsy ho anatin'ny asa fampihodinana ny fiarahamonina ary mitaky amin'izy ireo tsy hitafy toy ny cholas, dia efa azo atao ny mahita an-dry zareo hoe parlemantera, mpiasam-panjakana, mpanao gazety sy mpanentana anaty fahitalavitra, mpampianatra, mpianatra, mpanao trano, mpamily, mpandrindra fifamoivoizana, mpilalao an-tsehatra na mpilatro. Any anatin'ireny andraikitra ireny, dia lasa antonà fanadihadiana ry zareo, izay mbola azo andrefesana ihany ny fanavakavahana zakainy mandrak'ankehitriny.